Aoka ho Anjely
Lahatsoratra rehetra | Archives
Aretina sy aretina
Fitsaboana & fanampiana voalohany
Fanamarinana sy fanadinana Vet
Famepetahana sy fanapaka
Famolavola sy fananana fananana
Fandraisana an-trano & fiarovana
Seho sy fifaninana
Fiofanana amin'ny fitondran-tena
Miara-miaina amin'ny ankizy
Fiofanana momba ny fahaiza-manao
Lahatsoratra eny amin'ny fiaraha-monina
fatiantoka & alahelo
Avia ho namanay!KBTF ♥
Mirary ho an'ny mpirotsaka an-tsitrapo!
Lisitry ny haja
The Kerry Blue Terrier Foundation dia fiantrana tsy tombontsoa natokana ho fampiroboroboana ny fiantohana ny karazany Kerry Blue Terrier eo amin'ny sehatry ny fampianarana, famonjena sy fahasalamana ary fototarazo.
The Kerry Blue Terrier Foundation dia fiantrana tsy tombontsoa natokana ho fampiroboroboana ny fiantohana ny karazany Kerry Blue Terrier eo amin'ny sehatry ny fampianarana, famonjena sy fahasalamana ary fototarazo. Hamantatra bebe kokoa.
Nandefa imbetsaka isam-bolana.
Manaova fanamarihana amin'ny fotoana rehetra.
Ara-dalàna & GDPR
GDPR & Fampandrenesana ara-dalàna: manangona data momba anao izahay. Mampiasa mofomamy sy ra-baka izahay hanaraha-maso ny fomba ifandraisan'ny tranokalanay. Ekenao ny fampiasana ireo teknôlôjia ireo nandritra ny fampiasana ny tranokalanay. Ekenao ny politika cookie sy ny tsiambaratelo.
Ireo atiny, serivisy & vokatra rehetra dia omena anao mifanaraka amin'ny politika momba ny serivisy. Manaiky tanteraka momba ny fitsipiky ny fitondran-tena izahay rehefa mampiasa sy mandefa votoaty any amin'ny lampihazo.
Copyright © 2019 The Kerry Blue Terrier Foundation | Ampandehanin'i BaconBit
Aoka ho lasa patron member of KBTF ianao!
Ny maha-mpikambana anao dia manohana mivantana ny fandaharam-panavotana sy ny fandaharam-potoana.